Midowga Yurub oo digniin u diray Ra’isul Wasaaraha cusub ee UK – Bandhiga
Midowga Yurub oo digniin u diray Ra’isul Wasaaraha cusub ee UK
Madaxa Midowga Yurub ee la doortay ayaa uga digtay Ra’isul wasaaraha cusub ee UK Boris Johnson qorshaha uu doonayo in uu dib ula xaajoodo midowga Yurub oo ku aadan ka bixitaanka UK.
Ursula von der Leyen, oo ka tirsan xisbiga conservative ka ee dalka Jarmalka ayaa xilka gudoomiyaha gudiga midowga yurub si rasmi ah ula wareegi doonta bisha November, waxaana ay ugu baaqday xisbiyada siyaasada UK in ay xil iska saaraan waxa u wanaagsan shacabka Yurub iyo kuwa UK.
Mr Johnson ayaa todobaadyo ka hor waxaa uu wacad ku maray in uu dadajin doono ka bixitaan UK ee midowga Yurub, isaga oo wada xaajood cusub la furaya madaxda Midowga.
Ra,isul wasaare Theresa May oo xafiiska ka tageysa ayaa hiray ugu guul dareysatay in ay meel siyaasada ay ku dooneysay in dalkeeda uu uga baxo Yurub waxaana xubnaha Baarlamaanka UK ay ku guul dareysteen in arintaan ay isku waafaqaan kadib sadex kulan oo ay Yeesheen.
Hadalka gudoomiyaha gudiga midowga Yurub Von der Leyen ayaa ku soo aadaya saacado uun kadib markii xisbiga haya talada ee Conservative-ka uu ku dhawaaqay in Borris Johanson uu noqonayo Ra’isul wasaaraha xiga ee badalaya Theresa May.
Mr Johnson ayaa kaga guuleystay booskaan xoghayaha arimaha dibeda UK Jeremy Hunt, oo tartan adag uu ku dhexmaray kadib doorashii gudaha Xisbiga.
Ra’isul wasaaraha Cusub ayaa hormuud u ahaa dadaalada ay UK ku dooneyso in ay kaga baxdo Yurub kadib afti qaran oo shacabka dalkaasi laga qaaday sanadkii 2016-kii.